Ndeapi mabhenefiti uye ROI paKutsvaga Injini Kugonesa? | Martech Zone
Sezvo ini ndanga ndichiongorora zvinyorwa zvekare ini ndanga ndanyora pane yekutsvaga injini optimization; Ndakaona kuti paive papfuura makore gumi ndanga ndichipa gwara. Yekutsvagisa injini yekuwedzera yakakwira kusvika pakakwirira makore mashoma apfuura, indasitiri yemabhirioni yakakwira asi ndokudonha kubva munyasha. Nepo SEO vanachipangamazano vaive kwese kwese, vazhinji vaitungamira vatengi vavo munzira inokatyamadza yavaitamba injini yekutsvaga pane kuishandisa nemazvo.
Ini ndakatonyora standard, cliché chinyorwa, icho SEO yakanga yafa kune zvinotyisa kune avo vari muindasitiri yangu. Izvo zvaisave izvo zvekuti ini ndaifunga kuti injini dzekutsvaga dzaive dzafa, ivo vairamba vachiwedzera kuwedzera mukukosha uye kukanganisa kune emakambani edhijitari ekushambadzira nzira. Zviri kuti indasitiri yakanga yafa, varasika nzira yavo. Vakarega kutarisa kushambadza uye, pachinzvimbo, vakatarisa kune algorithms uye kuyedza kubiridzira nzira yavo kuenda kumusoro.
Mazuva ese, ini ndinogamuchira zvikumbiro kukumbira, kukumbira, kana kutoda kubhadhara backlinks. Iko kupenga sezvo zvichiratidza kushomeka kwakakwana kweruremekedzo kunharaunda yandakashanda kuvaka kukosha uye kuvimba neanopfuura makore gumi apfuura. Ini handisi kuzoisa izvozvo panjodzi kune chero chinzvimbo chinzvimbo.
Izvi hazvireve kuti ini handisati ndichinetseka nekuchengeta saiti yangu yakagadzirirwa enjini dzekutsvaga kana yeavo vatengi vangu. Yekutsvagisa injini yekuwedzera inoenderera kuve hwaro hweyese yeyedu kuyedza nevatengi vedu, hombe nediki.
Harris Myers akagadzira iyi infographic, SEO: Nei Bhizinesi Rako Richiida IZVOZVI?, izvo zvinosanganisira zvitanhatu zvikonzero nei bhizinesi rega rega riine organic yekutsvaga nzira.
Icho chiitiko chepamhepo chinotanga nekutsvaga - 93% yevatengi vanhasi vanoshandisa injini yekutsvaga kutsvaga zvigadzirwa nemasevhisi
SEO inodhura kwazvo - 82% yevatengesi vanoona SEO ichiwedzera kushanda, ne42% vachiona kuwedzera kwakakosha
SEO inogadzira yakakwira traffic uye yakakwira kutendeuka mitengo - 3 bhiriyoni vanhu vanotsvaga Internet zuva rega rega nemazwi akakosha kutyaira kwakakodzera, kwakanangwa kutsvaga kwakanangana.
SEO ndiyo yakajairwa mumakwikwi nhasi - Chinzvimbo hachisi chingori chiratidzo cheiyo comapny's SEO kugona, chiratidzo cheyako comapny masimba masimba mukati mekambani yako.
SEO inotarisira kumusika wefoni - 50% yemunharaunda yekutsvaga kwefoni inotungamira kushanyira kuchitoro
SEO inogara ichichinja uye nemikana yayo - Injini dzekutsvaga dzinoenderera nekuvandudza maalgorithms uye kugadzirisa uye kugadzirisa mhinduro kuti kuwedzere ruzivo rwevatengi. SEO hachisi chimwe chinhu iwe do, inoda kuenderera mberi kutarisisa kuongorora ese maviri ekutsvaga enjini uye nekuedza kubva kuneako macomputer.
Chinhu chekutanga chekurangarira nezve kudzoka kwekudyara kweSEO ndechekuti ichachinja nekufamba kwenguva. Kana iwe ukaenderera nekukwirisa uye nekugadzira zvinonakidza zvemukati, iyo kudzoka kune yekudyara kuchawedzera nekufamba kwenguva. Semuenzaniso, iwe unoburitsa infographic pane inokwikwidza izwi uye iyo mari iri $ 10,000 mukutsvaga, dhizaini, uye kusimudzira. Mumwedzi wekutanga, iwe unoita mushandirapamwe uye uwane mashoma anotungamira uye pamwe kunyangwe imwe shanduko ine kukosha kwe $ 1,000 XNUMX purofiti. YAKO ROI yakatarisana-pasi.
Asi mushandirapamwe hausati wawana kudzoka kwaro kukuru. Mumwedzi wechipiri nematatu, iyo infographic inokandirwa kune akati wandei masimba masimba uye inoburitswa pane vaviri. Chikwereti chinoguma chinowedzera chiremera chesaiti yako yemusoro wenyaya uye unotanga kukwirisa kumusoro pamakumi emazwi akakosha pamusoro pemwedzi mishoma inotevera. Iyo infographic uye inoenderana mapeji kana zvinyorwa zvinotanga kuwana mazana ezvinotungamira nemazana ekuvhara mwedzi wega. Iye zvino urikuona yakanaka ROI. Iyo ROI inogona kuramba ichiwedzera pamusoro pemakore mashoma anotevera.
Tine imwe infographic yemutengi inoenderera ichitarisa makore manomwe mushure mekutanga kuiburitsa! Tisingatauri isu takashandisa izvo zvirimo mukutengesa chibatiso uye zvimwe zvirongwa. Iyo ROI pane iyo infographic ikozvino mune zviuru!
Tags: mabhenefiti e seoorganic searchorganic yekutsvaga chinzvimboseoizvo zvinobatsiranyoka
Ndeipi mhedzisiro yeInternet Consumer Ongororo paBhizinesi Rako?